Isaladi kunye nemifuno - iBezzia | IBezzia
Las iisaladi kunye nemifuno Ziyeyona nto iluncedo kakhulu kwizifundo zaseSpanish. Ukongeza, ngokuba neendidi ezininzi, sinokwenza izinto ezintsha kwaye senze izitya ezahlukeneyo nezizodwa kwitafile yethu. Ngesi sizathu, eBezzia sifuna ukunika indawo koku kutya, okunempilo kwaye kuneempawu ezinesondlo ezinamandla.
Isaladi kunye nemifuno ngumthombo obalulekileyo wamanzi, izimbiwa, iivithamini, ifayibha kunye nezinto ezilandelwayo. Ukongeza, ukwakheka kwayo kunye negalelo layo azifikeleli kutshintsho ngenxa yenkqubo yokupheka kobushushu kwaye oku kunika izibonelelo ezinkulu.
Kwicandelo lethu elinikezelwe kwiiresiphi iisaladi kunye nemifuno Uya kufumana iindlela ngeendlela ezahlukeneyo zokulungiselela, nangona into elungileyo ngezi ndlela zekhosi yokuqala kukuba zilula kwaye kulula ukuzenza.
por UMaria vazquez yenzayo Iintsuku ze6 .
IKuku sisidlo semveli saseMbindi Mpuma esinokusithenga ngeomelet okanye ifrittata. Une…
Iimbotyi eziluhlaza kunye netofu kunye nesosi eshushu
por UMaria vazquez yenzayo Iiveki ze2 .
Namhlanje silungiselela isidlo esiphambili se-vegan onokuyonwabela wedwa okanye kunye, umzekelo, irayisi. Ezinye iimbotyi eziluhlaza ezine...
Iitapile ezifakwe isipinatshi kunye noshizi
Uya kuzithanda ezi tapile zifakwe isipinatshi kunye netshizi. Kwaye banokuhanjiswa njengesitya esikhulu, kodwa ...
Irayisi yeCauliflower kunye nemifuno kunye neqanda elibilisiwe
por UMaria vazquez yenzayo Inyanga e-1 .
Kukho izitya ezisecaleni ezifana nale rayisi yecauliflower enemifuno kunye neqanda elibilisiweyo eliye libe ngumhlobo omkhulu ...
Iimbotyi eziluhlaza kunye neham kwi-puree yethanga
por UMaria vazquez yenzayo Iinyanga ze2 .
Iimbotyi eziluhlaza kunye neham kukukutya kwesintu okuphekwe sisininzi kuthi. Namhlanje, nangona kunjalo, sikwenza ngokunika ...
Quiche nge salmon, broccoli kunye netshizi yebhokhwe
E-Bezzia sithanda kakhulu iiQuichés. Ezi maqebengwana zimnandi zibonakala ngathi ziyindlela efanelekileyo yokuqalisa xa sineendwendwe, ...
IAlboronia, umama wazo zonke iingoma
por UMaria vazquez yenzayo Iinyanga ze3 .
Ialboronia, bathi, ngunina wazo zonke iipistos. Isitya esiqhelekileyo ebesiphekwa ngolwesiHlanu e ...
Amaqanda aqhekeziweyo neetapile kunye ne-zucchini eneeprawn
Zingaphi iiresiphi ezine-zucchini esizicebisileyo ngeli hlobo? Kwaye namhlanje songeza enye kwincwadi yethu yeresiphi, oku kuqhuqhi ...
Ipesika, iavokhado kunye nesaladi yesalmon
Ngamanye amaxesha awukhethi into oza kuyipheka. Iimeko zisebenza kunye nemveliso enye, ezimbini okanye ezintathu malunga nokuphoswa ...
I-Aubergines ngetumato kwiProvençal
UZucchini udlale indima enkulu kwiindlela zethu zokupheka kule nyanga. Kodwa ayisiyiyo kuphela imifuno yamaxesha athile ...
I-zucchini edibeneyo kunye ne-crispy chickpeas kunye ne-tahini sauce
por UMaria vazquez yenzayo Iinyanga ze4 .
Uya kuthandana nale recipe! Le isitya se-zucchini eqhotsiweyo kunye namantshontsho aqhekezayo kunye ne-gravy ...